तिथि मेरो पत्रु » पत्रु एलर्जी र डेटिङ रह गर्न सक्छन्?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 19 2021 |2मिनेट पढ्न
त्यसैले, के तपाईं अझ राम्ररी चिनजान गर्न चाहनुहुन्छ कि कुनै पाएका छन्. तपाईं तिनीहरूलाई कुरा गर्दा, व्यक्ति-मा वा अनलाइन कि, आफ्नो अनुहार मा एक मुस्कान छ. You feel that things couldn’t get any better than they are, र त्यसपछि तिनीहरूले तपाईं एलर्जी कि घरपालुवा छ कि सिक्न. के गर्ने एक व्यक्तिको? तपाईं कारण आफ्नो एलर्जी गर्न सम्बन्ध मा परित्याग गर्न आवश्यक हुनेछ? विकल्प फेरि व्यक्ति त्यहाँ देखेर छैन के हो? अधिकांश मानिसहरू लागि, छन्.
पहिलो र प्रमुख, व्यक्ति तपाईं एक एलर्जी छ भनेर थाह गरौं. यो एक खुला र इमानदार सम्बन्ध राख्न आवश्यक छ (सुरु गर्न), र पनि तिनीहरू कि तपाईं प्रतिक्रिया कम गर्न सक्षम हुन सक्छ. तिनीहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ कसरी? तिनीहरू आफ्नो मिति अघि ताजा लुगा लगाएका छन् पक्का गर्न सक्छौं (तिनीहरूले लुगा लिए पछि पाल्तु जनावर कुनै अन्तरक्रिया भएको). यसबाहेक, तिनीहरूले आफ्नो तिथि को लागि आने पछि तिनीहरूले प्रयोग गर्न यस्तै एक वृक्ष ब्रश वा केहि गर्न सक्छन् (if their pet rides in the car and there isatransfer from the car to their clothes).
ध्यान अर्को क्षेत्र आफ्नो एलर्जी खुलारूपमा थाह छ. तपाईं एक ओटीसी एलर्जी औषधी लिन र साँझ ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन सक्छ? अथवा तपाईं एक EpiPen आवश्यकता हुनेछ एक गंभीर प्रतिक्रिया हुनेछ? एक EpiPen आवश्यकता कि उन को लागि, तपाईं एक ठूलो स्तर मा सम्बन्ध आकलन गर्न आवश्यक हुनेछ, because literally, your health is at risk. अरूलाई लागि, तपाईं बस सुनिश्चित तपाईं तिनीहरूलाई साथ रही अघि आफ्नो एलर्जी औषधी लिन गर्न सक्छन्, रात जान्छ र त्यसपछि आफ्नो प्रतिक्रिया निगरानी.
तपाईं आफ्नो ठाँउ समय खर्च भने, तिनीहरूले पाल्तु जनावर अनुमति छैन जहाँ एक कोठा सेट गर्न सक्छन्. सुरक्षा को एक जोडी पत्र रूपमा, तिनीहरूले हावा बाहिर एलर्जी राख्न एक फिल्टरिङ मिसिन हिड रहेको छ. त्यहाँ कि एलर्जी पीडित को लागि बजार मा धेरै उत्पादनहरु. यी उत्पादनहरू हावा मा dander को मात्रा कम हुनेछ, वा तोकिएको अन्तरिक्ष प्रवेश देखि एलर्जी राख्न एक बाधा रूपमा काम.
सबै भन्दा एलर्जी पीडितहरूका लागि, तिनीहरूले पहिले नै तिनीहरूलाई यी अतिरिक्त हुनेछ, तर तिनीहरूलाई बारम्बार चोट छैन. तपाईंले सधै हात मा तन्तुहरू छ गर्नुहोस्. तपाईं खुजली कारण छ कि एलर्जी छ भने, पानी आँखा र अधिक, आफ्नो नाक निरन्तर चलिरहेको छ भने तपाईं आफ्नो मिति कम आकर्षक लाग्न सक्छ वा रो गरिएको छ तर यसलाई देखिन्छ. तपाईं केही एलर्जी आँखा साथै तपाईं संग खस्छ हुन सक्छ. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
तपाईं खाँसी गर्न कारण आफ्नो एलर्जी गर्नुहुन्छ? कफ बगे र घाँटी lozenges कम तनाव मिति गर्नु अत्यावश्यक छन्. How many times have you gottenatickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? केही lozenges वा कडा कैंडी तपाईं आफ्नो मिति ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् भनेर आफ्नो घाँटी दूर कुतकुती लिन र कोट अझै पर्याप्त चिस्यान थप्न सक्नुहुन्छ.
खुला, मन खोलेर र एक सानो तयारी, तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर गर्न एक एलर्जी भए तापनि तपाईं अझै पनि रमाइलो सम्बन्ध हुन सक्छ.